Igwefoto Nwa-nwoke: Usoro nke gha enyere aka n’ulo ogwu | Ngwọta OMG
Gburugburu ụwa, ndị mmadụ na-abanye n'ụlọ ọgwụ kwa ụbọchị dị ka ndị ohi gbagburu, gbagbuo, na iti, yana mkpa ọgwụ na-abụghị ime ihe ike. A na-anabata ọtụtụ maka nlekọta obere oge ma ọ bụ ogologo oge. N’ebe ndị mmadụ jupụtara, ime ihe ike abụghị ihe a na-atụghị anya ya. Mgbe ụfọdụ ndị ọrịa na-akparị ndị ọrụ, ndị isi na-eti mkpu na ndị isi ma ọ bụ ụfọdụ ndị na-abụghị ndị ikwu na-abanye n'ụlọ ọgwụ ma mepụta ihe ike.
Dika ihe omumu nke International Association for Healthcare Security and Safety (IAHSS) mere, ihe fọrọ nke nta ka 80% nke ụlọ ọgwụ chọrọ usoro njikwa na nkwalite CCTV. Ndị na-ahụ maka ahụike na ndị ọkachamara n'ihe banyere nchekwa dị mkpa iji bulie usoro nkwenye onyonyo ndị a kapịrị ọnụ iji kpuchido ndị ọrịa, ndị ọbịa, ndị nọọsụ, ndị dibia, na ndị ọrụ n'ụlọ ọgwụ, ọfịs, ebe ambulatory, na ụlọ ọrụ nlekọta ogologo oge.
Ewebatala igwefoto nwere ihe di iche-iche n ’ulo ogwu iji mezi nchekwa maka ndi oru ahu ike. Emebere igwefoto ndị ahụ iji ziga ndị na-emegbu ma ọ bụ wakpo ndị ọrụ n'ụlọ ọgwụ ozi doro anya nke enweghị ndidi.
ndị a Ngwaọrụ na-enye nnabata buru ibu na mmekọrịta dị n'etiti ndị ọrụ ụgbọ ihe mberede na ndị ọrịa. Ndị na-ahụ maka paramedic na-etinye onwe ha n'ọnọdụ ndị siri ike ma dị ize ndụ. Cameras nyeere aka na ndị uwe ojii ibe ya ịchịkọta ọnụ iji hụ na e mere ihe banyere mpụ ọ bụla megide ndị ọrụ ma ọ bụ ntụkwasị obi. Igwefoto ahụ na-enyere aka ebe a site na ịnye ihe nkiri vidiyo a na-eleghị anya n'ihu na nke echekwabara echere n'ihu. Edebere vidiyo vidiyo ahụ na kaadị SD echekwara nke enwere ike iji ya dị ka ihe akaebe nabatara n'ụlọ ikpe.
The Enwere ike iji ndekọ site na igwefoto a maka nkuzi na ọzụzụ, yana nyere aka na-edozi usoro ọgwụgwọ ahụike. Ndị ọrụ ụgbọ ihe mberede nwere ike irite uru n'otu aka ahụ site na ịtụgharị ndekọ iji meziwanye nzaghachi ha n'ọnọdụ ma nweta nzaghachi ozugbo iji nyere aka mee mkpebi ịchekwa ndụ. A nwekwara ike iji kamera ndị a dị ka ọzụzụ maka ịbanye n'ime ndị ọrụ ọhụrụ ma gosi ha usoro pụrụ iche na otu esi emeghachi omume na ha.
Ngwurugwu na-eche mkparị na mmekpa ahụ mgbe ha nọ ọrụ, igwefoto a na-enye aka maka ịchọta ndị ahụ. Igwefoto eji ahụ mmadụ bụ nhọrọ a ma ama na nchekwa nke ndị ọrụ n'ihu. Ndị ọrụ Paramedic na-enyefe ndụ ha n'ịchebe na ilekọta ndị mmadụ n'oge mkpa kachasị ha na onye ọ bụla n'ime ha ga-abụ oke iwe ma ọ bụ ime ihe ike enweghị ike.
Ihe ịma aka ndị ụlọ ọgwụ chere ihu
Inye nchekwa ka mma maka ndị ọrịa, ndị ọbịa, na ndị ọrụ
Irubere iwu gọọmentị na nsogbu nche
Ikpuchido ya site na nkwuputa ugha na nnabata ya
Imeri nrụgide mmefu ego
Ijikwa njikwa ohere yana ihe nyocha vidiyo
Ngwa ahia ndi ara ahu nke OMG
Usoro nchekwa dị mma, na-arụ ọrụ dị elu na ngwaọrụ niile
Na-ebi egwu site na sistemụ arụmọrụ n'ime GPS eji arụ ọrụ
Nchekwa kaadi ebe nchekwa SD
Nlele ndụ site na 4G
E zochiri foto ndị a, enweghị ike dezigharị ya
A na-echedo ụkwụ ahụ maka ụbọchị 31 ọ gwụla ma a rịọ arịrịọ ka ijigide ya ogologo oge
Anyị na-enye ngwaọrụ, ihe mmetụta, traktọ, telemonitoring, teknụzụ ikuku na ngwaọrụ nsonye ụlọ ozugbo na ngwa ha maka ndị ụlọọgwụ
Igwefoto ahụ nwere ikike iji melite arụmọrụ na afọ ojuju n'ofe ụdị ọrụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ọmụmụ ndị ọrụ nchekwa, dịka ọmụmaatụ, igwefoto egosiputala na-enwe mmetụta dị njọ n'ahụ ndị na-eme ihe ike ọha na eze. Nke a, n'aka nke a, emeela ka afọ ojuju ọrụ kawanye mma site n'ime ka ndị ọrụ nwee ahụike na ọrụ ha. Vidiyo dị n'okpuru gosipụtara nke a nke ọma.
Ọ bụrụ na foto bara uru otu puku okwu, vidiyo ahụ nwere ike ịba nde. Ngbanye Live ike dị na igwefoto, nye ndị dọkịta nọ na saịtị ahụ inye ndụmọdụ gbasara ahụike nye ndị na - ahụ maka ndị ọrịa nọ na ala, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
n'ụlọ ọgwụ pụrụ iche na nsogbu nchekwa dị iche iche metụtara ụfọdụ ọrụ ana -akpokọta ọnụ n'otu nzukọ. Na mgbakwunye na mpaghara izugbe, ụlọ ọgwụ na-enwekarị ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ ahịa onyinye, ụlọ ahịa ọgwụ, na-ejide mkpụrụ ndụ maka ịgwọ ndị mkpọrọ na mpaghara ọgwụgwọ psyche niile na-egosi ihe teknụzụ pụrụ iche. N'ihi nke a, ngwakọta nke ngwaọrụ nchekwa nchekwa OMG na-ebuwanye ibu karịa nke ndị na-ebunye ndị ọzọ. Enwere ike ibunye vidiyo, njikwa ịnweta, mkpu, igwefoto ahụ, na ngwaọrụ ndị ọzọ ma jikọta ya na mmemme nchekwa ụlọ ọgwụ.
Ebe a na-adọba ụgbọala chọrọ nlebara anya pụrụ iche. Xbụ 24 -eme ọrụ ụbọchị, ebe a na-adọba ụgbọala n'ụlọ ọgwụ nwere ike ịnwe ọrụ oge niile, na-eme ka omume enyo enyo sikwuo ike ịchọpụta n'abalị. Ewezuga igbochi izu ohi na mpụ ndị ọzọ, ndị nche ụlọ ọgwụ na-ejide n'aka na ndị ọrụ na ndị ọrịa na-enwe ntụkwasị obi. Mgbe imechara igwefoto igwefoto CCTV bụ ihe kachasị mma maka iwere vidiyo na abali n’enweghi nsogbu na ihie mmiri maka ulo akara.
Lọ ọgwụ dị n'ọtụtụ ụzọ oghere dịịrị onwe ya, ụfọdụ ndị nyocha na-atụ aro ka iji igwefoto ahụ mee ihe n'oge ịwa ahụ yana enwere ike ịnyocha ihe nkiri edere site na ndị dọkịta nwere ahụike na ndị dọkịta na-awa ọhụụ, ma jiri ya n'oge ọzụzụ ahụike iji nyere aka zere njehie n'ọdịnihu. Mana na Eshia, enwere ọtụtụ ikpe ebe ndị dọkịta na-edekọ ọrụ nnyefe ma bulite vidiyo na mgbasa ozi mmekọrịta maka ịnweta nyocha na ndị na-eso ụzọ, yabụ, a ga-enyo enyo ese foto ahụ na ngalaba nlekọta ahụike yana iwu nke ha na njedebe ha maka iji igwefoto ahụ karịsịa na mpaghara ihe mberede.
Givot kwuru “Mgbe mmadụ pụtara n'ihu ọha na enweghị atụmanya nzuzo, yabụ itinye vidiyo na ihu ọha abụghị nsogbu. Ma mgbe mmadụ na onye na-ahụ maka ahụike na-akparịta ụka, enwere atụmanya nke nzuzo, ”.
Ọnwụnwa ọhụrụ ahụ mere na Hospitallọ Ọgwụ Berrywood, nke Northampton shire Healthcare NHS Foundation Trust nyere. Firmlọ ọrụ Calla wetara igwefoto 12 Reveal, nke ndị okenye na ndị otu nchekwa na-eyi na ngalaba nlekọta mgbatị ahụ mmadụ ise n'ụlọ ọgwụ, na-agbaso ọzụzụ. Ma ndị ọrụ ma ndị ọrịa tụlere na
Ngwaọrụ anyị dị n'ahịa maka nchekwa nke ụlọ ọgwụ yana maka ngalaba ndị ọzọ
Audio Nnyocha onyunyo Olu Voice
Igwe Igwe Igwe Na-ahụ Maka Ahụhụ
Obere WIFI / GPS / 3G / 4G Camera Worn Camera (BWC058-4G)
3G / 4G Igwefoto Ahụ Ikuku (BWC004-4G)
Obere Igwe Na - eme Ka Igwefoto na Nchekwa Mpụga (BWC055)
Igwe uwe ojii-nke Ekworo (BWC004)
Enweghi ike ikpuchi igwefoto na-ezoro ezo [Enweghị ihuenyo LCD] (BWC059)
Igwefoonu Ekpuworo aru, Nchekwa mpụga - SD Card 32GB-128GB (BWC043)
Ogologo awa [16 Hrs] Recordings Camera-Worn (BWC061)
Enweghi ike ikpuchi igwefoto na-ezoro ezo [Na ihuenyo LCD] (BWC060)
CCD Button Igwefoto (BWC054)
Obere igwefoto Nwa agboro - Super Video Compression (BWC058)
Igwe Mmiri Isi Wearable Na-ese Igwefoto (BWC056)
iji igwefoto eme ihe n'ọnọdụ ọnọdụ ahụike ahụike adịghị mma "bara uru", ndị nchọpụta ahụ kwuru.
Otutu nke ọha na eze kwenyere iyi igwefoto ahụ na ha ga-echegbu onwe ha banyere ekwe omume na onye na-enyeghị ikike, ndị ọzọ nwere ike ịnweta ozi nkeonwe ha, na ha ga-echekwa banyere ịkpa oke n'ọdịnihu n'ihi ngosipụta nke ozi ha. Ọtụtụ ndị dibịa ekwenyeghị na kamera ahụ ga-akpaghasị mmekọrịta onye ọrịa na dọkịta ma ha ga-enwe nchegbu banyere nchekwa nke ozi ndị ọrịa ha. N'ozuzu, ma ọha na ndị dibịa kwadoro mmejuputa usoro igwefoto ahụ na-eyi, na-atụle uru ndị ga-ekwe omume dị mkpa karịa ihe ọghọm o kwere omume. Otutu ndi mmadu kwenyere na ndi isi kwesiri inwe ihe omuma zuru oke ebe ndi oru ndi oria, ndi dibia ogwu, ndi oru ulo ogwu na ndi okacha amara ndi ozo kwesiri inwe uzo a
Ugbu a na-enye ụfọdụ nnyocha na-eme ụfọdụ ndị ọrụ ahụike.
Mgbe ulechara na ngalaba ahụike uche, gọọmentị chọrọ ndị ọrụ enyemaka ka ejiri kamera ahụ. Na 2014, ejiri nlezi anya nwaa iji igwefoto ndị eji arụ ọrụ mee ihe na ngalaba abụọ na Broadmoor, ụlọ ọgwụ psychiatric dị elu na Crowthorne, Berkshire. Ihe ngosi a gosiputara iji kwado ebubo nke mere mgbe a na-eme ihe ike n'ebe ahụ na obere mbelata ihe mere mwakpo ndị ọrụ. Ọzọkwa, enwere “mbelata nke ọma n'ọdịdị agbụrụ na ime ihe ike”, dịka onye na-ekwuchitere West London NHS Trust, nke na-agba Broadmoor.
Jim Tighe, onye ọkachamara na-ahụ maka nchekwa nchekwa na West London NHS Trust, kwuru na igwefoto ahụ emeela ka ndị ọrụ nwee ntụkwasị obi karịa. Anyị ejirila ihe nlele mee ihe ugboro ole na ole maka nyocha siri ike ma ọ nyere aka nke ọma ịhụ nke ọma ma nụ ihe merenụ. Ọ nwere ike inye aka belata ogologo oge nyocha ga-ewe n'ihi na ị nwetarala onye akaebe ahụ.
Yabụ, ka anyị nwechara mkparịta ụka were ogologo, anyị chọpụtara na teknụzụ ọ bụla nwere ụfọdụ ọfụma na ihe ọjọọ, mana igwefoto ahụ na-eyi na-enye ọtụtụ uru karịa nhụsianya ole na ole nwere ike ijikwa na teknụzụ. Gọọmentị kwesịrị inyekwu ego maka itinyekwu teknụzụ ọhụụ na mpaghara ọha. Ndị na-ahụ maka paramedic na-etinye onwe ha n'ọnọdụ ndị siri ike ma dị oke egwu. Na kamera ahụ nwere ike ịnye ihe ngosipụta vidiyo dị egwu banyere ndụ n'ihu ahịrị.
Anon., Nd NWAANY.. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.salientsys.com/industries/hospitals-healthcare/
Ngalaba Medical Laboratories, A., 2018 Feb. NCBI publmed.gov. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29331259
DeSilva, D., nd Na-ekpughere. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.revealmedia.co.uk/5-ways-body-cameras-could-help-ambulance-staff
Mei, TT, FEB 1, 2019, Oge Eserese. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.straitstimes.com/singapore/health/body-worn-cameras-for-scdf-paramedics
Morris, A., Mee 30, 2019. Express na kpakpando. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.expressandstar.com/news/health/2019/05/30/ambulance-staff-to-wear-body-cameras-as-40pc-of-paramedics-attacked/
Mulholland, H., Wed 1 Mee 2019. KPỌRỌ GUJI. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.theguardian.com/society/2019/may/01/body-cameras-protect-hospital-staff-patients-violence-mental-health-wards
Igwefoto-Worn: Ahụ ga-enyere gị aka n'ụlọ ọgwụ gbanwere ikpeazụ: December 3rd, 2019 by admin
Nzuzo 3152 12 Echiche Taa